သရဲ​ခြောက်​တဲ့ရွာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သရဲ​ခြောက်​တဲ့ရွာ
Posted by ေမာင္ရိုး on Aug 28, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 31 comments
ဘုရား ဘရား ….
ရွာထဲမ​ရောက်​တာကြာလို့ ဝင်​ကြည်​့မိတာ​ခေါင်​းပြတ်​သရဲနဲ့တိုး​နေပါ​ပေါ့လား …
မဖြစ်​ဘူး … မဖြစ်​ဘူး းးး လစ်​မှ … ​တော်​ကြာ ဦး​ကျောက်​​ပြောဖူးသလို ဝင်​ပူး​နေမှဖြင်​့ ​ခေါစာပစ်​​နေရဦးမယ်​ ….
အင်​းးး ရွာကြီးလည်​း အပမှီ​နေသလားမသ်ိ ။ တိတ်​​ခြောက်​လို့ … ကိုယ်​့​ခြေသံ​တောင်​ကိုယ်​ကြား​နေရတယ်​ …
ငြင်​း​ဖော်​ငြင်​းဖက်​ ဆဲ​ဖော်​ဆဲဖက်​ ​ပေါ​ဖော်​​ပေါဖက်​ ​တွေလည်​း ​ဆော်​ကြည်​ထီ​ပေါက်​ နိဗ္ဗာန်​​ရောက်​ကုန်​ပြီထင်​့ …..
တစ်​​ယောက်​မှကို မ​တွေ့​တော့ဘူး ။
ဟဲ့ !!! ပလုတ်​တုတ်​ .. !!
​နောက်​က​နေခါးတို့တာ ဘယ်​သူလဲဟ …
​ဟေ့ … ဆာမိတဲ့​နော်​ တစ်​မိတည်​းရှိတယ်​ … သရဲလိုလို ဘာလိုလို​တော့ မ​ခြောက်​နဲ့ …
@%@&#&#&#&$%*%%#&$%$@$@% အဲဒါဘဲကွ !!!
ဗျို့ … ဗျို့ဦး​ကြောင်​ ဦး​ကျောက်​ ဦး​ပေါက်​ ဦးခ ဦးမိုက်​ ဦးပု ဦးဘလက်​ ဦး​ပေ ဦးနို ဦးထူးဆန်​း ဦးမျိုး ဦးဂဏန်​း
ဦး​ဖော ​မောင်​အံ ​မောင်​ဂီ ​မောင်​ဆက်​ ​မောင်​မာဃ ​ ကိုတိုက်​ ကိုရဲ ကိုကမ်​း
ကိုဖက်​ ကို​မှော်​ ကိုဘလှိုင်​ ကိုရင်​စည်​…….
ကဲဗျာ …. မရှိကြရင်​ဘည်​းပြီး​ရော
ကျုပ်​က သရဲ​ခေါစာပစ်​တာ ​ပြောပြမလို့ဗျ
တစ်​ခါတုန်​းက စစ်​​တောင်​းမြစ်​​ဘေးနားက ရွာတစ်​ရွာကိုအသွား ……
အ​ဲဒီမှာ ထူးထူးဆန်​းဆန်​း ​တောထဲ ဘူ​ဖေး​ကျွေး​နေတာ​တွေ့ရတာဘဲ​ဗျို့ ။
ကျုပ်​လည်​း စပ်​စပ်​စုစုဆို​တော့ ….. ဘာ​ပြော​ကောင်​းမလဲ …
ကဲ ကဲ ဘယ်​သူမှမရှိပဲ ​ပြော​နေရတာ မနိပ်​ဘူးဗျာ …မနက်​ဖန်​ည လူ​ခြေတိတ်​တဲ့အချိန်​ ရွာဇရပ်​ကိုလာခဲ့ကြ …​ပြောပြမယ်​
​ကြောက်​တတ်​ရင်​ ​တော့ မလာနဲ့​ပေါ့ဗျာ …
ကျုပ်​က ​ပြောပြချင်​​နေတာ ပါးစပ်​ကို ရွစိ ရွစိနဲ့ဗျို့ ……. ဟားး ဟားး ဟားး ဟားးးးးး
surmi has written 113 post in this Website..
View all posts by ေမာင္ရိုး →
ခင်​ဗျားတို့ ရွာထဲတစ်​​ယောက်​ထဲ ​လျောက်​ဖူးလား
အကြောက် နဲ့ ကဆာမိ။
တရဲ ဖမ်းပြီး သူကြီးဆီ ပို့ မယ် လို့ စီစဉ်သံ ကြားလိုက် လို့ ထင်ရဲ့။
အမြီး တောင် မတွေ့ရတော့ဘူး။
ရွာထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ လျှောက်ရတာကတော့ ကျုပ်အတွက် မဆန်းတော့ပါ ကဆာမိရေ။
သို့ပေသည့် ပေါ့ပေါ့ တွေးပြီး ကွင်းလုံးချွတ် တော့ မပြေးနဲ့။
အိမ်ထဲကနေ ချောင်းကြည့်နေတဲ့ သူတွေ အပုံ။
ဘူဖေး အကြောင်း ပြောမယ်ပြောပြီး ပျောက်သွားမယ်တော့ မကြံ နဲ့ဦး။
ရွာထဲဝင်​ ကြည်​့လိုက်​တာ ​ခြောက်​တိတ်​​နေလို့ ….
ရွာဘယ်​လမ်​းမ​ပေါ်​တော့ ကိုယ်​တုံးလူံးနဲ့ မ​ပြေးရဲ​ပေါင်​
သဂျီး ပွမ်​ရင်​​တော့ အရီးစစ်​ကူလုပ်​​ပေး
ဒါမျိုးမကြောက်လို့ ရွာရိုး တစ်ယောက်တည်း လျှောက်တာ ကြာပါပြီ ဆာဆာရယ်။
ကြောက်လာရင်တော့ ဟောင်ကောင် က တွင်းတူးသမားကြီး လှမ်းခေါ်ပြီး လျှောက်တယ်။
အချိန်တူတာဆိုလို့ သူနဲ့ပဲ ရှိတာကိုးးးး
အဟွတ်… ကိုရင်ဆာရယ်… ကျောက်စ်မှာလည်း
ခြင်ကျားဘိုက ငယ်သူငယ်ချင်း ကပ်စီးလင်မယား ဟောင်ကောင်ကို အလည်ရောက်နေလို့…
လိုက်ပို့ရ ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးရနဲ့မို့ပါဗျ… ရေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ…
Min Zarni says:
ကျော်တို့ မဇာယိတို့ ကျောက်စ် တို့ အလင်းsex တို့ အိပ်ချိန်ပြင်ပ ရွာထဲရောက်စ်နေပါကြောင်း သတင်းပို့ပါသည်..
ဦးဆာတစ်ယောက်ထဲ ထင်တိုင်းကျဲနေတာ ဘယ်လွှတ်ပေးလို့ဖစ်မလဲ…
သဂျီးကတော့ သူ့မီလျှံဘစ်ဇနက်အတွက် သရဲစောင့်ဖမ်းနေတာ ရွာထဲ :hee:
ဖြိုးပြန်ပျောက်သွားပြီးနောက်.. ရွာလည်းပြန်ခြောက်သွားတာပဲ ဦးဆာရယ်..
ဒါဆို ဖြိုးပျောက်လို့ သဂျီး၊ အောင်ကြူး၊ ကပု တို့ အသဲကွဲပီးငြိမ်နေတာဖစ်မယ်… နာထင်ရင်လွဲခဲတယ်
ကျုပ်ကိုတော့.. ဖြိုးချစ်သူ.. ကိုရင်ကြောင်တကောင်..အဲ..အဲ..တယောက်ဖေ့စ်ဘုတ် မက်ဆေ့ချ်နဲ့လာဆဲနှုတ်ဆက်.. အဲ..အဲ.. လာရေးနှုတ်ဆက်နေတယ်ဗျ…
အော်… ဒဂျီးနဲ့ အောင်ကြူး… ဖြိုးကို လုနေတာဂိုးးးးး
အီးတုံးလေးပေါသလို မိန်းမတွေ ရင်ထုပီး လင်လုရတဲ့ခေတ် ရောက်ပီထင်ဒယ် :hee:
လူခြေတိတ်ချိန် လာခိုင်းဒယ်ဆိုဒေါ့ …
ခညား ယီးတီးယားတား လုပ်ဖို့ဒေါ့ မကျံနဲ့နော့ …
ကျုပ်ဂ ဒါးယူဂဲ့မှာ ….
တစ်ခါတစ်ခါ ရွာထဲ လူစည်နေဒဲ့အခါ အီလုပ်ဒွေ ချုပ်နေရို့မို့ မြင်သာမြင် မကြင်ရဒဲ့ဘွဘာ …
အားဒဲ့အခါကျဒေါ့လည်း ကိုးနတ်ချင်က ညက်နှာဒါ မပေး …
ကိုးနတ်ရှင်ကောင်းဒဲ့ သန်းခေါင်ဂျော်ကျဒေါ့လည်း ဘူမှ မချိ .. ပျင်းစရာ အတိ …
ဒါဂျောင့် ရွာထဲ ခြောက်နေဒါဟာ …
ခင် ခ says:
မဆီမဆိုင်လား ဆိုင်လေမလားတော့မသိ ဝင်ပွားမယ်။
အခုတလော ဒို့ဘားမန်မှာ ကွန်မကောင်းတာရယ်။
သဂျီး org နဲ့ com နဲ့ အလုပ်တွေ ခဏခဏရှုပ်တာရယ်။
အဲဒါတွေကို ကျော်လွန်ပြီးသကာလ မန်ဘာတွေမှာ ရထားတဲ့ ကြယ်တွေလည်း တန်းတူဖြစ်သွားတယ်။
ကျွန်တော်သိရသလောက် အဲဒီကြယ်ပွင့်တွေက နေရင်းထိုင်ရင်း တစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးသွားခဲ့တာ ဟုတ်ဘူးတဲ့ ကိုယ်အချိန်တွေ အတွေးတွေ အရေးတွေ အဲလိုတွေနဲ့ ရင်းခဲ့ပြီးမှရခဲ့ကြတာဆိုတော့ ရခဲ့တဲ့သူတွေမှ ပိတိဖြစ်ပြီးကျေနပ်နေမိမယ်ထင်တယ်။ အခုတော့ သာတူညီမျှ တပွင့်လှလှတွေ ဘဲရှိကြတာရယ်။
ပြီးတော့ ပိုစ့်တစ်ခုကို မန်ဘာအချင်းချင်းဝင်ဖတ်ခဲ့ကြတယ် အဲလိုဝင်ဖတ်အားပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိစေချင်တော့ အဆင်ပြေရာမန့်ကြတယ်(ဥပမာ-ဝင်ရောက်အားပေးသွားပါတယ်) ဒါကို ပွိုင့်ညာယူတယ် လို့မြင်လေလားမသိ အနုတ်ပေးထားတာမျိုးတွေ့ရတာရယ်။
ကိုဆာ စဉ်စားကြည့်လေ ရုပ်မချောတာတော့ မချောတာပေါ့ ဒါပေမယ့်သူခဗျာ ကြိုးစားပန်းစား သနပ်ခါးပါးကွက်လေးနဲ့ အလှဆင်လာတာကို ဘာမှမပြောဘဲနေတာမှတော်အုံးမယ် နင်ရုပ်ကလည်း မလှရတဲ့ကြားထဲ ပါးကွက်ကြားနဲ့ဆိုတော့ သရဲမြင်ရင်သူကတောင်လန့်ပြေးအုံးမယ်ပြောတော့ ဟိုကခံနိုင်မလား ဘာမှမပြောဘူးလှည့်ထွက်ပြေးရင်တောင် စိတ်ထဲတော့ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ အဲဒီတော့ အဲဒီလူ သူကိုမလှဘူးပြောတဲ့ဆီ ပြန်လာပါအုံးမလားလေ။
ဒီလိုနဲ့ဘဲဗျာ ရွာထဲ( ယခုသဂျီးအဆို မြို့ထဲ ) ကသူတွေ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှဘဲ ဝိုင်းဖွဲ့ကာနေကြလေသတည်း။ ဝိုင်းဖွဲ့တယ်ဆိုလို့ တောင်တွေးမြောက်တွေး မထင်နဲ့ မန်းဂေဇက်ရွာသူားများဖေ့ဘုတ်ဝိုင်းပြောတာပါ အဲဒီမှာတော့ စည်သပေါ့။
တလက်စထဲ နောက်တစ်ခု ဖတ်ရွေးက အဖွဲနဲ့ရွေးပြီး ဗုတ်နဲ့အကဲဖြတ်တယ် အဲဒီမှာတစ်ခုတွေးမိတယ် ဖတ်ပြီးရွေးပေးတဲ့သူနည်းရင် ဗုတ်လုပ်ရမယ့်ပိုစ့်နည်းမယ် အဲဒီမှာ အကယ်လို့များ ကြိုးစားကာရေးပြီး ဗုတ်ထဲတောင်မပါလာလို့ စိတ်မကောင်းတဲ့သူလည်းရှိလာနိုင်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဗုတ်က (၁၅) ရက်လောက်ပြထားတာလေ။ ရွာဖွင့်တိုင်းမြင်ရတော့ ဖွင့်မကြည်ချင်ရာကနေ ဝေးကြလိမ့်မယ်။ အရင်လို ဖတ်ရွေးအဖွဲ့အင်အားမများတော့ရင် ဖတ်ရွေးကိုရပ်သင့်တယ်ထင်ပါ၏။ လွတ်လပ်စွာ ရေးကြ ငြင်းကြ ဆိုရင် ပြန်ပြီးရွာထဲပွဲစည်လေမလားပေါ့။(အကြံပြုခြင်းသက်သက်မျှသာ)
အော် ဦးဆာမိနှယ့် ရှိပတော် ရှိပေ
ဒီမှာ..ကလေးထိန်း အဝတ်လျှော် မီးပူတိုက် လုပ်နေရတယ်တော့…
ဒီမှာ နေပူတုန်းလေး အနှီးလေး လှန်းနေတာကို….. ဟွန်..
ပြီးရင် အနှီးတွေ မီးပူတိုက်ရအုံးမယ်…. အားဘူးတော့…
ညနေကျမှ ချိန်းတဲ့နေရာ လာခဲ့မယ်…. ဒါဘဲ..
ဒီကိစ္စ အတွက် ဒီလဘယ်နှစ်ယောက်ရွေးပေးနိုင်လည်းတချက်လောက်စောင့်ကြည့်ချင်ပါဂျောင်းးးး
ကျနော်က ဘောပွဲရာသီစပြီဆိုတော့ နည်းနည်း အလုပ်ရှုပ်နေလို့ပါ ၊
ဒါပေမယ့် မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိ ဖေ့စ်ဘုတ် နဲ့ ဂဇက်ကို
ရေးလက်စ ၂ ပုဒ် ရှိပါတယ် ၊
ရေဆန်လမ်းက ပန်းတစ်ပွင့် ( ၂ ) နဲ့ ကြွေရက်ရယ်ဖြင့် မစောစေချင် ၊
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း တင်ပါ့မယ်ဗျာ ၊
ရွာလယ်လမ်းမမှာ လျှောက်တိုင်း ခြောက်ကပ်ကပ် ဖြစ်နေတာ ကြာပေါ့
လူလဲ ဘယ်အိမ်မှ သိပ် ဝင်ပြီး မနှုတ်ဆက်ဖြစ်ဖူး
မနက်ဖြန်ညမှ ရွာဇရပ်ကို လာခဲ့မယ်ဗျို့
လောလောဆယ်တော့ နတ်ပြည်သွား လွှတ်တော်တက်လိုက်ဦးမယ်
သဂျီးရဲ့မြို့ကို ဝင်ဖို့ မျက်စေ့လည်ပြီး ဝင်ရခက်တာက အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ကိုယ်တိုင်လည်း တခြားပေ့ချ်တွေသာ လွယ်လွယ်ပွင့်သွားတယ်။
သဂျီးရဲ့မြို့ကတော့ အဝိုင်းကလေး လည်နေတာနဲ့တင် တနေကုန်ရော။
ဥက္ကဌသစ်ကြီးရေ- ဖတ်ရွေးရှိနေသရွေ့တော့ အမြုတေ မမ ဖတ်ရွေးပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းးးးး
(စာစုံ/ကုန်အောင် မဖတ်ဖြစ်လို့ မမျှမတဖြစ်ရင် တာဝန်မယူပါ။)
” သဂျီးရဲ့မြို့ကို ဝင်ဖို့ မျက်စေ့လည်ပြီး ဝင်ရခက်တာက
ဟုတ်ပါ့ ။ ရန်ကုန် connection ကလည်း သိပ်ဆိုး ။
အဘ ဒီတစ်လ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဝင်ရွေးပေးပါ့မယ် ။
ချိန်းတုန်းက ချိန်းပြီး ဇရပ်မှာ ကျုပ် တစ်ယောက်ထဲပါဗျို့။
လွမ်းရေးထက် ဝမ်းရေးခက်နေတဲ့ ဘဝ မို့ ရတဲ့ အချိန်လေးတွေတော့ ရွာထဲ ရောက်လာတတ်ပါတယ် ခင်ဗျ
အမှတ်တရ မေး တာအတွက် ကျေးဇူးပါ ၊ ကျွန်တော်လဲ
ဒီ ရက် ထဲ ပြင်းပြင်းပျပျ သတိရနေမိတဲ့သူ တစ်ယောက်တော့ ရှိရဲ့
ရွာ့ အချစ်တော် ပေါက်ဖော် တစ်ယောက် ရွာက ဝေးနေတာ နှစ်ချီနေပြီလားတောင် မသိ
အိမ်သာနတ်မှာ ဖတ်ရတဲ့ သတင်းတွေလို
နိုင်ငံခြားကို လူကုန်ကူးခံရပြီး မှန်ခန်းထဲပဲ ရောက်နေပြီလား မသိ
ခေါစာပစ်တာလေးလဲ စောင့်ဖတ်နေပါ့ မယ်
မကြာခင်​ ရွာဇရပ်​မှာ ​ပြောထားတဲ့အတိုင်​း တင်​ပြသွားပါမယ်​ ……
အနော်လည်း ခေါစာပစ်တယ်… ဘယ်လိုပစ်သလဲဆိုဒေါ့ သရဲနဲ့တူတဲ့ သဂျီးဦးခိုင်မ်ပို့စ်တွေမှာ မှတ်ချက်ပေးတယ်.. အဲလို အဲလို… သဂျီးက ရုပ်ဆိုးသလောက် သာမီးဒေါ်ဂလေးက ချောပါ့ဗျာ…။ သာဂျီးဂဒေါ် ဆေးမိသွားလို့ သူ့ယူမိတာနေမှာ…
အ​ပြေးလာမည်​ ခဏ​စောင်​့ …..။
သံဗုဒေ ရွတ်ပြီးမှ ရွာထဲ ဝင်ရမလိုဖြစ်နေပါကြောင်း။
ခြင်္သေ့ ငယ်လျှင်လည်း စီးရွေ့မရပါကြောင်း။
Norton Anti Virus မှတ်ပုံတင်နှင့်တကွတင်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ရွေ့ ရှေ့ရှောက် ရွာထဲသို့ တစ်ပတ် နှစ်ခါလျှောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ။
ကိုဆာမိရေ။ ကြုံရင်တော့လည်း အပြင်မှာဆုံချင်သေးသဗျာ။
ဟုတ်​ကဲ့ပါ ကို​စွယ်​​တော်​​ရေ …
ဘာရယ်​မဟုတ်​ပါဘူးအစ်​ကို​ရေ သုံးရက်​​နေလို့ ပို့စ်​ ၅ ပုဒ်​မပြည်​့လို့ ဒဂျိ ဒဂျိ လုပ်​လိုက်​တာ
ကျနော်ကတော့ တစ်ပါတ်တစ်ခါ မှန်မှန်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လာသွားတာတောင် လာမှန်း မသိလိုက်ကြတာများပါတယ်။
မောင် ပေ says:
ရွာက ပြောလို ့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး
ကုလား နွားသတ်အစ်နေ ့လိုမျိုးကြီး
မောင်ပြန်လာပြီ ချစ်တဲ့ လွမ်းပိုရေ —- အဲ ဟုတ်ပါဘူး—- ကျွန်တော် ပြန်လာပါပီ ဦးဆာရေ —